Manchester City oo markale isku dayeysa soo xero-gelinta xiddig ka tirsan kooxda Inter Milan… (Imise milyan ayay ku doonaysaa bisha Janaayo?) – Gool FM
Manchester City oo markale isku dayeysa soo xero-gelinta xiddig ka tirsan kooxda Inter Milan… (Imise milyan ayay ku doonaysaa bisha Janaayo?)
(Manchester) 08 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay isku dayi doonyo inay soo xero geliso xiddiga Inter ee Milan Skriniar.
Sida ay warinayso maanta oo Axad ah Jariiradda The Express kooxda Man City ayaa dalab cusub oo ku kacaya 60 milyan oo euro ka gudbinaysa daafaca naadiga Inter Milan ee Milan Skriniar bisha Janaayo.
Xaqiiqdii ma’ahan markii ugu horreeysay oo ay isku dayaan inay soo iibsadaan xiddigan caalamiga ah ee reer Slovakia, laakiin dalabyadii hore oo dhan waa la soo diiday.
Daafacan dhexe ee 24-sano jirka ah ayaa laga soo iibsaday Sampdoria sanadkii 2017-kii, iyadoo lagu soo qaatay adduun dhan 34 milyan oo euro, laakiin qiimihiisa lagu helo karo ayaa illaa iyo haatan laban-laab ah.
Tababare Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameedsanayo Skriniar kaddib markii Manchester City ay ku dhacday dhibaato dhaawac oo sarreeya, taasoo saameyn ku yeelatay daafacyadooda dhexe.
Aymeric Laporte ayaa u baahday qalliin dhanka jilibka ah, waxaana uu garoomada ka maqnaan doonaa dhowr bilood.
Haddii Kooxda Manchester City ay soo jeedinayso qorshe cusub oo ku saabsan saxiixa Skriniar oo markii hore ay doonaysay Man United, waa inay bixiso wax aan ka yareyn 60 milyan oo euro.
Qaar ka mid ah xiddigaha xulka Soomaliya oo laga soo reebay qaranka dibna ugu soo laabtay Muqdisho
Juventus oo dharbaaxo xoog leh bisha Janaayo la damacsan Kooxda Manchester United